तीन गुणा बढ्यो काठमाडौं–दिल्ली हवाइ भाडा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
तीन गुणा बढ्यो काठमाडौं–दिल्ली हवाइ भाडा
प्रकाशित मिति ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०६:३३ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । काठमाडौं–दिल्ली उडानको हवाइ भाडा तीन गुणा बढेको छ। भारतीय वायुसेवा कम्पनी जेट एयरवेजले नेपाल उडान स्थगित गरेपछि यो रुटमा हवाई भाडा चर्को वृद्धि भएको हो।
काठमाडौं–दिल्लीका यात्रुलाई हवाई टिकट पाउन गाह्रो भएको ट्राभल एजेन्सीले जनाएका छन्। जेटले हरेक उडानमा एक सय ६८ यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको थियो। अहिले दैनिक करिब पाँच सय यात्रुको चाप अन्य वायुसेवामा परेको छ।
काठमाडौं–दिल्ली वायुसेवा कम्पनीका निम्ति लाभदायक गन्तव्य हो। काठमाडौं–दिल्लीको दुईतर्फी उडान गर्ने अन्य वायुसेवाले पनि पर्याप्त मात्रामा उडान थप गर्न सकेका छैन।
कम्तीमा एक साता अगाडिको टिकट पाउन गाह्रो पर्ने एरोलिना टुर्स एन्ड ट्राभलका प्रबन्ध निर्देशक यमबहादुर खड्काले बताए। उनका अनुसार एक साताअगाडि ८्९ हजार रुपैयाँमा पाइने टिकट अहिले २८ हजार रुपैयाँ पनि पाउन कठिन छ। खड्काका अनुसार बिहीबार मात्रै काठमाडौंबाट दिल्लीको टिकट किन्न आएका अमृत ढुंगानालाई तीन दिनपछिको इकोनोमी क्लासको टिकट लिन हम्मेहम्मे पर्‍यो।
ढुंगानाले बल्लबल्ल २८ हजार रुपैयाँमा नेपाल एयरलाइन्सको काठमाडौंबाट दिल्लीको एकतर्फी टिकट पाए। टिकट बिक्री गर्ने व्यवसायी आफैं दिल्लीबाट काठमाडौं फर्कने हवाई टिकट नपाएकै कारण दुई दिन लगाएर काठमाडौं आउनुपरेको छ।
प्रिज्म इन्टरनेसनल ट्राभल एन्ड टुर्सकी प्रबन्ध निर्देशक बिन्दु प्रधान गत चैत २९ गते दिल्लीबाट गोखरपुर हुँदै भैरहवाको बाटो भएर काठमाडौं आएकी छिन्। उनले भनिन्, ‘दिल्ली–काठमाडौंको सीधा हवाइ टिकट नपाएपछि दिल्लीबाट गोरखपुर जहाजमा आएँ।’
दशैंअघि सेयर कारोबारमा अनलाइन प्रणाली नआउने
काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली दशैंअघि नआउने भएको छ ।
मोक टेस्टिङमा भएको ढिलाई, नेप्सेलाई ब्रोकरहरुले गरेका…
दुई अर्ब वर्षअघिको महाविष्फोटन : जसले पृथ्वीलाई बस्नयोग्य बनायो !
पृथ्वी जीव बस्नप्रतिकूलबाट अनुकूलतातर्फ कहिले आयो होला ? यसबारे धेरै जिज्ञासु हुनसक्छन् । पृथ्वीको यो परिवर्तन प्रक्रियाबारे अध्येताहरुले…
सर्वोच्चको पत्र पर्खदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । व्यावसायी अजय सुमार्गी खाताबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालबाट पत्र आएपछि पक्रियाअघि बढाइने नेपाल राष्ट्र…
पुरुषले पनि नर्सिङ पढ्न पाउने कानुनको माग !
काठमाडौँ । मकवानपुरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूले आफूले जागिरभन्दा पनि सेवामूलक ढंगले बिरामीको उपचार गर्ने गरेको बताएका छन्।
पहुँचवादीको वर्चस्व, आन्दोलन गर्यो जागिर खायो
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राहत शिक्षक संघर्ष समितिबीच २२ असोज ०७५ मा तीन बुँदे…
वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम प्रयोगमा आउन सकेन, प्रत्येक बर्ष १० हजारको मृत्यु
काठमाडौं । वायुलगायत प्रदूषणले काठमाडौंको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सवारीसधानले फालेको धुवाँ, साडकको धुलो र अन्य प्रदूषणले पैदल…
पूर्वमन्त्री बास्कोटा गाली बेइज्जती मुद्दा लिएर अदालत पुगे
पूर्वराज्यमन्त्री साह भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर , चार वर्ष कैद र १९ करोड जरिवाना
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग प्रधानमन्त्रीको अर्थपूर्ण भेट, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई चिन्तित पाएँ’
पेट्रोलमा ८६% कर : पूर्वाधार कर पाँचबाट १० रुपैयाँ बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
पर्यटनमन्त्री अधिकारीसहित सातजनाको हेलिकप्टरमा निधन भएको आज एक वर्ष पूरा
इटलीमा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिदै
राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि बैतडीमा आज सार्वजनिक विदा
ओलीले माधव नेपाललाई भने, सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ
पेट्रोलमा ८६% कर : पूर्वाधार कर पाँचबाट १० रुपैयाँ बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय 12 views
पूर्वराज्यमन्त्री साह भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर , चार वर्ष कैद र १९ करोड जरिवाना 12 views
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालासँग प्रधानमन्त्रीको अर्थपूर्ण भेट, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई चिन्तित पाएँ’ 10 views
वयस्क पुरुषले एक रातमा कति पटक यौनसम्पर्क गर्न सक्छ ? जानी राखौ9views
महिनावारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? सुरक्षित दिन कुन कुन हो ? हेर्नुस7views